Iindaba - Jonga umahluko phakathi kokudluliselwa kwe-thermal kunye noshicilelo lwe-thermal
Namhlanje ndiza kukuzisa konke malunga nomahluko phakathi kokudluliselwa kwe-thermal kunye ne-thermal eprintiweyo yokushicilela iileyibhile zokuzincamathela, makhe sijonge!
Njengabashicileli abashushu, sinokusoloko sibabona kwiivenkile ezinkulu ezisetyenziselwa ushicilelo lwerisithi, okanye ushicilelo lwerejista yemali yePOS.Emva kokufaka iphepha le-thermal, unokuprinta ngokuthe ngqo ngaphandle kwe-inki okanye iribhoni.Ngokwahlukileyo, ixabiso leeribhoni liphantsi.
Abashicileli bekhowudi yebha bafumana isiphumo soshicilelo ngokufudumeza intloko yoshicilelo iribhoni yokudlulisa thermal, kwaye ngamanye amaxesha inokutshintsha umshicileli we-thermal.Ilungele ukuprinta iileyibhile zokugcina iimpahla, iilebhile zexabiso levenkile enkulu, iilebhile zamachiza ezonyango, iilebhile zeLogistics express, kunye neelebhile zemveliso, njl.
Malunga nomahluko phakathi koshicilelo lwe-thermal kunye nokudluliselwa kwe-thermal:
1. Eyokuqala imalunga nekhowudi yebar yemowudi yoshicilelo
Umshicileli wethu webhakhowudi yokudlulisa i-thermal yimowudi-mbini, enokusebenzisa zombini imo yokushicilela yokudlulisa i-thermal kunye nemo yokushicilela i-thermal;
Nangona kunjalo, umshicileli we-thermal yimowudi enye, enokwenza kuphela ushicilelo lwe-thermal.
2. Okwesibini, ixesha lokugcinwa kwelebula eprintiweyo lihlukile
Iileyibhile eziprintwe ngabashicileli bebhakhowudi yokudlulisa thermal zinokugcinwa ixesha elide ngokwentelekiso, elinokuba ngaphezu konyaka omnye;kodwa iileyibhile eziprintwe ngabashicileli be-thermal zinokugcinwa kuphela iinyanga ezi-1-6.
3. Iindleko zokugqibela zezinto ezisetyenziswayo zahlukile
Abashicileli bekhowudi yebha yokudlulisa iThermal kufuneka basebenzise iiribhoni kwaye ixabiso leelebhile liphezulu kakhulu;abashicileli bekhowudi yebha ye-thermal bafuna kuphela iphepha le-thermal.Ngokwahlukileyo, ixabiso liphantsi, kodwa intloko yoshicilelo eyisebenzisayo Ilahleko isenkulu kakhulu.
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Qr Code Reader Barcode Scanner, Iskena seBhakhowudi yaseTshayina, Iskena seBhakhowudi yeQr, Iskena seBhakhowudi esitshiphu, Iskena seBhakhowudi, Iskena seBhakhowudi esibambe ngesandla, Zonke iimveliso